Fotoana famakiana: 6 minitra Efa nieritreritra ve ianao hoe ahoana izany mahatsapa tahaka ny jeren'ny, sakany-maso, avy sary lehibe varavarankely toy izao tontolo izao Rambon-danitra misy amin'ny alalan'ny? Ahoana ny rehefa lulled ny torimaso ny tapaka hohozongozonina ny lamasinina araka ny trundles nidina ny lalana? Matetika ny dia an-dalamby…
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny Coronavirus nipoaka be no mahatonga ny fiahiana ny olona manerana izao tontolo izao, fa angamba iray amin'ireo olana lehibe indrindra dia ny hoe miatrika mpandeha. Satria sarotra ny manova ny drafitry ny dia ary efa napetraka ny tapakila, mety misy dikany kokoa izany…
Fotoana famakiana: 5 minitra Noho izany dia efa nanao izany farany. Ianao nandatsaka noho ny vakansy any am-piasana, Nividy tapakila ny fiaramanidina ka nitodi-doha ho an'i Hongria ho tsara mendrika fety. Ary raha izay no Raharaha tsara ihany no tsara – sady koa anie, Budapest dia tanàna tsara tarehy – aza mivarotra ny tenanao…
Fotoana famakiana: 6 minitra Frantsa no an-trano ny an'arivony manintona. Avy amin'ny malaza Tour Eiffel any Paris ny pebbled tora-pasika ao Nice, ny tany tsy misy farany ny zavatra atao. Ahoana anefa raha ianao mitsidika eo amin'ny layover, na efa nizaha ny trano fandraisam-bahinao ianao…
Fotoana famakiana: 10 minitra Ny iray amin'ireo tena mahazatra sy ny fomba mora indrindra mandeha eo Londres sy Paris no alalan'ny Eurostar, haingam-pandeha ny lamasinina mampifandray ny roa kapitaliny. Raha misy ny plethora ny safidy ho an'ny mpanao dia lavitra nijery ny hanao ny hop izahay, ny Eurostar dia mijanona ho iray amin'ireo…
Fotoana famakiana: 12 minitra Vao tsy ela akory izay izahay no nanoratra bilaogy momba ny Riding with kids amin'ny fiaran-dalamby ary nanome anao torohevitra vitsivitsy hampialana voly ireo ankizy kelinao. mamaky boky, milalao Uno, ary ny fihainoana audiobooks dia azo antoka fa tsy maintsy ho an'ny olona rehetra, fa misy fampiharana an-taonina maro alaina alohan'izay…